Fitondrana HAT : Inona no hamehana nanendrena an’i Reboza Julien? -
AccueilRaharaham-pirenenaFitondrana HAT : Inona no hamehana nanendrena an’i Reboza Julien?
Nametra-pialana ny faha-27 Mey 2013 ny VPM Hajo Andrianainarivelo rehefa namadika an-dRajoelina, ka nilatsaka ho kandidà filoham-pirenena. Ireo izay mahalala tsara an’i Hajo dia efa fantatra hatramin’ny fotoana nanendren’ny governemantan’ny mpanongam-panjakana azy ho VPM misahana ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny tany ny taona 2009, fa tsy maintsy hamadika ny filohan’ny HAT ny tenany. Efa fombany izay!
Vaky tanteraka ny ady teo amin’i Andry Rajoelina sy Hajo Andrianainarivelo nanomboka teo. Midika izany fa tsy nanana fahefana teo anivon’ny governemanta HAT intsony ity VPM teo aloha ity, indrindra tamin’ny fanendrena izay hisolo azy. Porofon’izany, ny fanambarana nataon’ny SGP Haja Resampa, ny faha-4 Septambra 2013, namaky ny fanendrena ny VPM Reboza Julien, araka ny baikon’i Andry Rajoelina sy ny praiminisitra Omer Beriziky.
Nanana dimy volana araka izany ny fitondrana HAT nikarakarana ny paikady rehetra nivarotana ny “villa Elisabeth”, ary tsy maintsy nenjehana talohan’ny daty nanaovan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fianianany tetsy Mahamasina.
Fa ny fanontaniana mipetraka eto dia hoe: “tanim-panjakana sy tranom-panjakana firy no lafon’ny fitondrana Rajoelina tao anatin’io dimy volana farany io?”. Mandringa hatrany mantsy ny raharaham-panjakana, ary tsy misy fanaraha-maso intsony mihitsy rehefa akaiky hifarana tahaka ireny ny fitondrana iray, mainka moa fa nandritra iny fitondrana HAT iny. Variana (norebirebena raha ny marina kokoa) tany amin’ny resaka fifidianana ny vahoaka leon’ny Tetezamita sy ny mpanongam-panjakana, ka dia nanararaotra ny sasany.
Noho ny hamehana
Inona no hamehana tsy maintsy nanendrena ny VPM Reboza Julien kanefa minisitra mpisolo toerana vonjy maika (par intérim) avokoa ny sisa rehetra nandritra ny fanendrena ireo mpikambana tao amin’ny governemanta HAT farany, ny faha-4 Septambra 2013? Ohatra: ny minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Ulrich Andriantiana no notendrena ho minisitra mpisolo toerana vonjy maika ho an’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny; ny minisitry ny Fahasalamana Johanita Ndahimananjara no notendrena ho minisitra mpisolo toerana vonjy maika ho an’ny minisiteran’ny Rano; ny minisitry ny Solika Marcel Bernard no notendrena ho minisitra mpisolo toerana vonjy maika ho an’ny minisiteran’ny Asam-panjakana. Koa mipetraka ny fanontaniana manoloana izao raharaha “villa Elisabeth” izao: “Inona no hamehana tsy maintsy nanendren-dRajoelina sy Beriziky ny VPM Reboza Julien, efa-bolana taty aorian’ny fametraham-pialan’i Hajo Andrianainarivelo, dimy volana mialohan’ny fahataperan’ny Tetezamita?”. Azo natao tsara anefa ny nanendry minisitra mpisolo toerana vonjy maika niantoka ny fampandehanan-draharaha tao amin’io minisiteran’ny Fanajariana ny tany io.
Nitsefotra ny fikasan-dratsin’ireo « mpampihorohoro » saika hanapoaka baomba tetsy Mahamasina nandritry ny fotoam-bavaka lehibe notarihin’ny Kardinaly Piertro Parolin sekretera jeneralin’ny Vatican. Voasambotra ara-potoana ny mpitsikilon’ireto « mpampihorohoro » ireto. Tamin’ny 10 ora latsaka fahefany, no tra-tehaky ny zandary ...Tohiny